ကေဘယ်လ်ကြိုးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | တရုတ်ကေဘယ်လ်စက်ရုံ
UTP CAT6A LAN ကေဘယ်လ်
ဤ UTP LSZH ကြိုးများသည်ယနေ့ခေတ်မြန်နှုန်းကွန်ယက်လုပ်ငန်းသုံးများအတွက်အကောင်းဆုံး bandwidth ကိုသေချာစေသည့်အားကောင်းသောစံနှုန်းများကိုအခြေခံသည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အလျား ၁၀၀ မီတာအထိရှိသောအလျားလိုက်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု application များကိုထောက်ပံ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Pair color code Pair 1: White / Blue နှင့်အပြာရောင် Pair 2: White / Orange နှင့် Orange Pair 3: White / Green နှင့် Green Pair 4: White / Brown နှင့် Brown အသုံးချခြင်း● MHz 500Hz MHz အထိအမျိုးအစား 6A ကွန်ယက်များကိုထောက်ပံ့သည်။ အသုံးချပရိုဂရမ်များ●အလျားလိုက်နှင့်ကျောရိုး ...
CAT6 LAN Cable ကို
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ အရည်အသွေးမြင့်တင်သွင်းထားသောအောက်ဆီဂျင်ကင်းသောကြေးနီပစ္စည်းကိုခံနိုင်ရည်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောအချက်ပြခြင်းစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုသည်။ 2. ထူသောအသားအရေသစ်၊ ဆန့်။ ခေါက်သိမ်းနိုင်သော၊ အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း။ 3. မြင့်သောသိပ်သည်းဆအတွင်းပိုင်းသိုလှောင်ထားခြင်းသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကောင်းမွန်သောပုံသွင်းနိုင်ခြင်း။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Cable အမျိုးအစား CAT6 Shielding အမျိုးအစား UTP cable sheath PVC / LSZH ၏အလုပ်လုပ်အပူချိန် -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) ကြိုးအရောင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်မှု 1Gbps ကြိုးအရှည် 305M / vol ...
UTP CAT5E LAN Cable ကို
UTP Lan Cable CAT5E Ethernet သည်အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတပ်ဆင်ထားပြီးအသုံးပြုမှုအတွက်သက်တမ်းပိုရှည်သည်။ IEEE မှသတ်မှတ်ထားသော Ethernet စံသတ်မှတ်ချက်အရကြယ်တာရာ topology ကိုအသုံးပြုပြီးအများသုံးဒေသတစ်ခုသည်လိမ်လည်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် electromagnetic interference ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုထိရောက်စွာတားဆီးရန်အတွက် function ကိုသဘောပေါက်သည်။ ထို့ကြောင့် wiring system သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော electromagnetic compatibility နှင့် transmission performance ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထိပ်တန်းအရည်အသွေးပစ္စည်းနှင့်အတူလာကြ, th ...
သံချပ်ကာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ Tactical Fiber Optic Cable ကို Mobile Portable Metal Cable Reel
Per-terminated သံချပ်ကာကေဘယ်ကြိုးသည်ဖိုက်ဘာဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သောနေရာများကိုယာယီကွင်းဆင်းရန်အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်သယ်ဆောင်နိုင်သောကေဘယ်ကြိုးပါရှိသည်။ သံချပ်ကာကေဘယ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး kinks မရှိဘဲအသုံးပြုမှုများစွာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ cable တစ်ခု၏အဆုံးတစ်ခုသည် reel နှင့်ကပ်နေပြီးအခြားတစ်ဖက်သည် equipment အတွက် patch လုပ်ရန်လွတ်လပ်စွာ coil လုပ်ထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။
Cable အချင်း (mm) Fiber အချင်း (mm) Cable Weight (kgs) ဆန့်နိုင်စွမ်း (N) ကြိတ်ခွဲနိုင်သည့်အစွမ်း (N) Min ။ ကွေးအချင်းဝက်အပူချိန် Range (℃) နှစ်ရှည်ရေတိုရေရှည်ရေတိုရေတိုရေတိုရေတို 1.6 0.6 2.5 60 100 100 500 10D 20D -20 ~ + 60 1.8 0.6 3.0 60 100 100 500 10D 20D -20 ~ + 60 2.0 0.9 3.5 60 100 100 500 10D 20D -20 ~ + 60 2.4 0.9 5.0 60 100 100 500 10D 20D -20 ~ + 60 ...
ဒီဇိုင်း လုပ်၍ ထုတ်လုပ်ထားသော၊ ကြာရှည်သောကေဘယ်ကြိုးအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သောပရိုဖိုင်းကိုချိုးဖောက်နိုင်သောကေဘယ်ကြိုး။ ဘရိတ်သည်ဘက်ထရီအားကောင်းသော PC (Polycarbonate) မှပြုလုပ်သည်။ ဘရိတ်နှင့်ဘရိတ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒြပ်ဆွဲအားအထူး PE ပေါင်းစပ်ထားသည့်ကေဘယ်ကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင်အားသာချက်များ၊ ပေါ့ပါးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ပြိုလဲခြင်းမှခုခံနိုင်ခြင်း၊ ပုံပျက်သောလွယ်ကူခြင်း၊ ဆီခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာရေးဆွဲခြင်း - PCD235 စွမ်းရည်သည်မတူညီသောအပြင်ဘက်အချင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
MTWC စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာရေစိုခံဖိုင်ဘာ optical connector ကို
၎င်းသည်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကွင်းဆက် optical cable များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကြားနေလှိုင်းသော့ခတ်ထားသည့်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ဦး ခေါင်းနှင့်ထိုင်ခုံ၊ ဦး ခေါင်းနှင့် ဦး ခေါင်း၊ ထိုင်ခုံနှင့်ထိုင်ခုံအကြားမြန်ဆန်။ ကျိုးကြောင်းမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ Multi-core ဆက်သွယ်မှုနှင့်မျက်စိကန်းသောသွင်းခြင်း၊ အနိမ့်ဆက်သွယ်မှုဆုံးရှုံးမှုနှင့်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရ; ကြမ်းတမ်းသော၊ ရေစိုခံနိုင်မှု၊ ဖုန်မှုန့်ခံနိုင်မှု၊ ကြမ်းတမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်ခုခံမှုစသည်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဖိုင်ဘာဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကွန်ပျူတာစနစ်များ၊
GYXTC8Y အပြင်ဘက်ဝေဟင်ပုံ ၈ Uni-Tube Non-Armored Cable ကို
အပူချိန်ကာလလည်ပတ်မှု: -40 -C မှ + 70ºCသိုလှောင်မှု: -50ºCမှ + 70ºCတပ်ဆင်ခြင်း: -30ºCမှ + 70ºCကွေးခြင်းအချင်းဝက်: တည်ငြိမ်သော 10D Dynamic 20D ဖော်ပြချက် Uni-Tube Fig8 ကိုယ်ပိုင်ဂျယ်လ်ကြိုးကြိုး ယူနစ်တစ်ခုလုံးနှင့်သွပ်ရည်စိမ်ခံသံမဏိ messenger ကိုအနက်ရောင် polyethylene အပြင်ဘက်အကျီဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းဆောက်လုပ်ရေး Fiber - 2-12 အမျှင် Uni-loose tubel gel နှင့်ပြည့်စုံသည့်အပြင်ဘက်အကျီ - အနက်ရောင် UV နှင့်အစိုဓာတ်ခံနိုင်သည့် polyethylene (PE) ။ Messenger ကကြိုး - ဖော့စဖိတ် ...
GYXTC8S ပြင်ပဝေဟင်မှ Uni-Tube ပုံ ၈ ကြွက်အကာအကွယ်ဖြင့် Self-Supported Optical Cable
အပူချိန်ကာလလည်ပတ်မှု: -40 -C မှ + 70ºCသိုလှောင်မှု: -50ºCမှ + 70ºCတပ်ဆင်ခြင်း: -30ºCမှ + 70ºCကွေးခြင်းအချင်းဝက်: တည်ငြိမ်သော 10D Dynamic 20D ဖော်ပြချက် Uni-Tube Fig8 Self-Supported Cable သည်ဂျယ်လီနှင့်ပြည့်နှက်နေသောအလွတ်ကြားခံပြွန်ထဲတွင်ထည့်ထားသောအမျှင်များနှင့်နှင့် မြှောင်းပုံသံမဏိသံချပ်ကာဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ယူနစ်တစ်ခုလုံးနှင့်သွပ်သွင်းထားသောသံမဏိ messenger အားလုံးသည်အနက်ရောင် polyethylene အပြင်ဘက်အကျီဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းဆောက်လုပ်ရေးအမျှင်: ၂-၂၄ အမျှင်မျှင် - ချည်မျှင်ရောင်ဖြည့်ကော် - သံမဏိ - သံမဏိတိပ် Outer Jacket ...
အပူချိန်ကာလလည်ပတ်မှု: -40 -C မှ + 70ºCသိုလှောင်မှု: -50ºCမှ + 70ºCတပ်ဆင်ခြင်း: -30ºCမှ + 70ºCကွေးနေသောအချင်းဝက်: တည်ငြိမ်သော 10D Dynamic 20D ဖော်ပြချက် Single Jacket Non-Armored ကေဘယ်ကြိုးများသည်သေးငယ်သောအချင်းနှင့်ပေါ့ပါးပြီး duct နှင့် aerial installation အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ lashing နည်းလမ်း။ အားအင်ပြည့်ဝသောပတ် ၀ န်းကျင်ပတ်လည်တွင်ကြိုးချည်နေပြီဖြစ်သည်။ ကေဘယ်ကြိုးသည်ဂျူလီယမ်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ရေထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန် Aluminum Polyethylene Laminated သည်အစိုခံအတားအဆီးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ခနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားသည် ...
GYFXTY-FL Non-Metallic Flat-Span Aerial Drop Outdoor Cable
အပူချိန်ကာလလည်ပတ်မှု: -40 -C မှ + 70ºCသိုလှောင်မှု: -50ºCမှ + 70ºCတပ်ဆင်ခြင်း: -30ºCမှ + 70ºCကွေးနေသောအချင်းဝက်: တည်ငြိမ်သော 10D Dynamic 20D ဖော်ပြချက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ Flat-Span Drop ကေဘယ်သည်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီနေ့၏ FTTx ကွန်ယက်များအတွက် link ကို။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုအမျှင် 24 အထိပါဝင်သောတစ်ခုတည်းပြွန်နှင့်အတူသက်သေပြကြားခံပြွန်နည်းပညာကိုအသုံးပြု။ ဆောက်လုပ်ထားသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဆန့်ကျင်သောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုကြားခံအပေါက်အားဘေးဘက်တစ်လျှောက်တွင်ထားရှိသည်။
GYFXTY-FG အပြင်ဘက်တွင် Uni-Tube အားလုံး Dielectric ဝေဟင် Drop Cable ကို
အပူချိန်ပမာဏလည်ပတ်မှု: -40 -C မှ + 70ºCသိုလှောင်မှု: -50ºCမှ + 70ºCတပ်ဆင်ခြင်း: -30ºCမှ + 70ºCကွေးနေသော Radius: Static 10D Dynamic 20D ဖော်ပြချက် Uni-Tube အားလုံး Dielectric Aerial Drop ကေဘယ်လ်သည်အထူးသဖြင့် Fiber-to-the-Subscriber လျှောက်လွှာများ။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပြီးအားလုံးသော dielectric cable သည် Self-supporting drop-type တပ်ဆင်မှုများအတွက်လည်းကောင်း၊ ဖန်ထည်မျှင်အစွမ်းသတ္တိအားအဖွဲ့ဝင်များကိုနောက်ထပ်စက်မှုကာကွယ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကုန်ပစ္စည်းတည်ဆောက်မှု ...